Shirka Madasha Wada-tashiga Qaran Ayaa muqdisho ka furmi Doona – Wanleweyn – Hoyga Wararka Tayeysan – Wararka Soomaaliya
Shirka Madasha Wada-tashiga Qaran Ayaa muqdisho ka furmi Doona
Wakiilka Qaramada Midoobey u qaabilsan Soomaaliya Micheal Keating ayaa sheegay in shirka Hoggaamiyeyaasha qaran ee Madasha Wada-tashiga Qaranka uu berri oo Arbaco ah ka furmi doono Muqdisho.
Mr Keating ayaa shalay kula kulmay magaalada Muqdisho Madaxweyne kuxigeenka Puntland iyo Guddoomiyaha Baarlamaanka Puntland, iyagoo ka wada hadlay tabashada Puntland iyo hakintii doorashooyinka ka socday Garowe.
Arrimaha ugu muhiimsan ee shirka looga hadli doono ayaa waxaa ka mid ah dhameystirka hanaanka doorashada dadban, cabashada ka imaanaya Musharaxiinta, buuqa iyo muranka ka jiray deegaanada ay doorashooyinka ka dhaceen.
Sidoo kale arrimaha ugu muhiimsan ayaa waxaa ka mid ah tabashada Puntland ee ku aadan doorashada Aqalka Sare ee xubnaha Sool iyo Sanaag ka imaanaya ee lagu dooranayo Muqdisho, iyadoo dooneysa in Garowe lagu doorto, waxaana dhowaan ay hakisay doorashadii ka socotay Garowe.
Inkastoo Ergeyga Qaramada Midoobey Micheal Keating uu ku dhawaaqay in shirka Madasha Wada-tashiga qaran uu berri ka furmayo Muqdisho, ayaa waxaa magaalada Muqdisho ka maqan inta badan Madaxda Madasha ay ku maqan yihiin safaro gudaha dalka, kuwa dibadda iyo deegaanadooda ay ku kala sugan yihiin.
Shirkan ayaa la filayaa kii ugu dambeeyay ee ay yeeshaan Madaxda Madasha Wada-tashiga Qaran, ka hor doorashooyinka Guddoomiyaha Baarlamaanka iyo tan Madaxweynaha ee lagu wado inay dhacdo, inkastoo aan lagu dhawaaqin waqti rasmi ah.
Previous: Carlos Bacca oo qayb ka noqon doona Weerarka Kooxda Arsenal
Next: Doorashada labo kursi oo ka mid ah kuraasta Aqalka Hoose ee Maamulka Galmudug ayaa saaka ka dhacday degmada Cadaado,